Golaha Wasiirrada oo ansixiyay Guddiga maamulka Hay’adda Qaran, xili… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Golaha Wasiirrada oo ansixiyay Guddiga maamulka Hay’adda Qaran, xili…
Ardaan Yare 21 January 2021
Shirka Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo shir guddoominayay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu ansixiyey Guddiga sare ee maamulka Hay’adda qaran ee naafada Soomaaliyeed, xubin ka bannaanatay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka iyo xubin laga saaray guddiga maamulka hay’adda batroolka Soomaaliyeed.
Golaha Wasiirrada ayaa warbixinno la xiriira amniga guud ee dalka ka dhageystay Wasiirrada Amniga Gudaha iyo Gaashaandhigga, waxayna tilmaameen in Ciidanka qaranku ay u diyaarsan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa amniga iyo xoreynta dalka.
Xubnaha Golaha Wasiirrada ayaa wadajir uga tacsiyeyeey geerida guddoomiyihii degmada Hodan ee Gobolka Banaadir oo xalay ku geeriyooday fal nasiib darro ah oo ka dhacay Muqdisho, waxayna fareen hay’adaha ammaanka in baaritaan dhab ah lagu sameeyo sababaha keenay dhacdadan.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa golaha la wadaagtay warbixinnadii ugu danbeeyey ee caabuqa karoona iyo dadaalka ay waddo dowladdu ee la xiriira sidii bulshada looga wacyigelin lahaa dhibaatada uu leeyahay xanuunkan.
Dowladda oo Saraakiil iyo Askar u xirtay dilkii loo geystay Guddoomiye Dhaga-juun
Dowladda Soomaaliya oo War kulul kasoo saartay Qaraxyo khasaaro geystay oo ka…